ट्रम्प विरुद्ध महाअभियोग दर्ता : अमेरिकी इतिहासमा दुई पटक महाअभियोगको सामना गर्ने पहिलो राष्ट्रपति ! - लोकसंवाद
माघ ७, २०७७, बुधबार
जीवनदर्शन लोकरञ्जन पर्यटन विदेश अपराध खेलकुद स्वास्थ्य साहित्य
ट्रम्प विरुद्ध महाअभियोग दर्ता : अमेरिकी इतिहासमा दुई पटक महाअभियोगको सामना गर्ने पहिलो राष्ट्रपति !
पुष २८, २०७७
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सन् २०१६ मा राष्ट्रपति बन्ने । उनी राष्ट्रपति धेरै कमले मात्रै अनुमान गरेका थिए । तर कमजोर चुनावी अभियानबाट यात्रा सुरु गरेका ट्रम्प अन्ततः विश्वकै शक्तिशाली देश अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्न सफल बने । डेमोक्र्याटिक नेतृ हिलारी क्लिन्टनको ह्वाइट हाउस यात्रा रोक्दै अमेरिकी राष्ट्रपति बनेका अर्बपति रियल स्टेट कारोबारी ट्रम्पको कार्यकाल अन्य राष्ट्रपतिको भन्दा फरक ढंगले सकिदैछ ।
गत ३ नोभेम्बरमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफू पराजित भएपछि त्यसको परिणामलाई अस्वीकार गर्दै आएका ट्रम्पले ६ जनवरी निर्णायक हुने बताउँदै आएका थिए । अमेरिकामा ६ जनवरीमा ३ नोभेम्बरमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणामअनुुसार १४ डिसेम्बरमा इलेक्टोरल कलेजले गरेको मतलाई प्रमाणिकरण गरी राष्ट्रपति निर्वाचित भएको घोषणा गरिन्छ । सोही कारण ट्रम्पले ६ जनवरीमा आफ्ना समर्थकलाई वासिङ्टन डिसीमा आएर निर्वाचनको परिणाम अस्वीकार गर्न र आफूलाई राष्ट्रपति बनाइराख्न कंग्रेस र उपराष्ट्रपति माइक पेन्सलाई आग्रह गरेका थिए । सोही अनुसार ६ जनवरीमा ट्रम्प समर्थकले अमेरिकी संसद भवन क्यापिटल बिल्डिङमा झ्याल ढोका नै फोडेर हिंसात्मक रुपमा भित्र प्रवेश गरेर हिंसा मच्चाएका थिए । सो क्रममा पाँच जनाको मृत्यु समेत भएको थियो । सो घटनालाई लिएर ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएकाे छ ।
तल्लो सदनका डेमोक्र्याटहरुले राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध ‘दंगालाई प्रोत्साहन गरेको’ आरोप लगाउने तयारी गरेका छन् । क्यापिटल बिल्डिङ हिंसात्मक ढंगले नियन्त्रणमा लिइएको घटनामा ट्रम्पको भूमिकालाई लिएर महाअभियोगको दर्ता भएको हो । संसदीय दलका सचेतक जेम्स क्लाइबर्नले यो साता महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने बताउँदै आएका थिए ।
फेसबुकले पनि ट्रम्पमाथि दिनभरि प्रतिबन्ध लगायो । उनको खाता इन्स्टाग्रामले पनि चलाउन नमिल्ने बनायो । २० जनवरीसम्म ट्रम्प शक्तिमा रहनेछन् । सामाजिक सञ्जालबाट समेत प्रतिबन्धित भएपनि उनी लामो समय चुप लागेर बस्छन् भन्नेमा धेरैलाई विश्वास छैन । राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछि फ्लोरिडास्थित आफ्नो घरमा गएर उनले पुनः शक्तिमा फर्किने योजना बनाउनेछन् ।
ह्वाइट हाउसले भने राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको भन्दै महाभियोगको सम्भावना खारेज गरेको छ । ह्वाइट हाउसले भनेको छ, ‘त्यस्तो कदमले हाम्रो महान् देशलाई थप विभाजित गर्न मात्र सघाउने छ ।’ यो प्रक्रिया अघि बढेसँगै ट्रम्प अमेरिकी इतिहासमा दुई पटक महाभियोगको सामना गर्ने पहिलो राष्ट्रपति हुनेछन् । त्यसका लागि महाभियोगको आरोप तल्लो सदनबाट पारित हुनुपर्नेछ । यसअघि ट्रम्पमाथि गत वर्ष महाभियोग लगाइएको थियो । त्यसपछि प्रक्रिया माथिल्लो सदनमा जानेछ र राष्ट्रपतिलाई हटाउन दुईतिहाइ मत आवश्यक हुन्छ । यद्यपि उनी अब एक सातमा ह्वाइट हाउसबाट बाहिरिनेछन् । तल्लो सदनका सांसद क्लाइबर्नले १० दिनमा ट्रम्पले राष्ट्रपति कार्यालय छोड्नुअघि उनलाई महाभियोग लगाउन र सुनुवाइ गर्न समय अभाव रहेकाे बताएका छन् । तर उनलाई दोषी ठहर्‍याएमा ट्रम्पलाई फेरि 'सार्वजनिक कार्य' (जीवन) जिम्मेवारीमा रोक लगाउन सिनेटमा मतदान हुन पर्छ भन्ने मत रहेको थियाे ।
डेमोक्र्याट र रिपब्लिकनहरूले ट्रम्पमाथि पाँच जनाको मृत्यु भएको गत बुधवार संसद्मा भएको हिंसालाई प्रोत्साहित गरेको आरोप लगाएका छन् । ट्रम्पमाथि हिंसालाई प्रोत्साहित गरेको आरोप लगाएपनि कुनै पनि रिपब्लिकनले महाअभियोगको पक्षमा मतदान गर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
केही रिपब्लिकनहरु भने ट्रम्पले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा छन् । ट्रम्पले भने २० जनवरीमा आफूले शान्तिपूर्ण रुपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताइसकेका छन् । रिपब्लिकन सिनेटर प्याट टुमीले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘मेरो विचारमा देशका निम्ति उत्तम बाटो भनेको राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने र जतिसक्दो चाँडो टाढा जाने नै हो । म त्यो सम्भावना नरहेको स्वीकार गर्छु तर मलाई लाग्छ सबैभन्दा राम्रो त्यही हुन्थ्यो ।’ अलास्काकी रिपब्लिकन सांसद लिसा मर्कावस्कीले पनि राष्ट्रपति ट्रम्पलाई पद त्याग गर्न आग्रह गरेकी छन् । ६ जनवरीमा भएको हिंसापछि ट्रम्पलाई अमेरिकी संविधानको २५ औं संशोधनको प्रावधान प्रयोग गरेर भएपनि तत्काल हटाउन आवाज तीव्र रुपमा उठेको छ । सो संशोधनमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषदका बहुमत सदस्यले राष्ट्रपति जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको घोषणा गरेर उपराष्ट्रपति कार्यबाहक राष्ट्रपति बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रतिबन्ध
ट्रम्पको सामाजिक सञ्जालसँग समेत बेलाबेलामा सम्बन्ध बिग्रिदै आएको थियो । शक्तिशाली राष्ट्रपति ट्रम्पले केहीपटक फेसबुक र ट्विटरलाई जरिवानादेखि प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मका धम्की दिएका थिए । तर अहिले यस्तो समय आएको छ कि ट्रम्पकै ट्विटर खाता सधैंका लागि बन्द गरिएको छ । ट्रम्पले समर्थकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने भाषाका दुई वटा ट्वीट हटाएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपतिको ट्विटर खातालाई १२ घण्टा पोस्ट गर्न नमिल्नेगरी ‘लक’ गरिदियो ।
राष्ट्रपतिका रुपमा पहिलो कार्यकालमा अमेरिकी समाजलाई दुई अलग धारमा विभाजित गरेका उनले आफ्नो खराब छविलाई सुधार गर्ने कोशिस गर्नेछन् । त्यसलाई रोक्न पनि डेमोक्र्याटहरु आफ्नो बहुमत भएको कंग्रेसलाई भरपुर उपयोग गर्नमा केन्द्रित हुनेछन् । त्यसैले प्रक्रियाका हिसाबले ट्रम्पलाई महाअभियोगको प्रक्रिया पूरा गरेर हटाउन अब सहज छैन । तर राजनीतिक रुपमा शक्ति प्रदर्शन गर्न र ट्रम्पलाई पुनः कुनै पदमा फर्किनबाट रोक्न डेमोक्र्याटले सक्दो भूमिका खेल्ने सम्भावना भने प्रष्ट देखिएको छ । एजेन्सीको सहयोगमा
भारतमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक करोड पाँच लाख ९५ हजार भन्दा बढी
राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा ७३ जनाको सजाय माफ
नयाँ स्वरुपको कोरोना भाइरस विश्वका ६० देशमा पुग्यो
हजारौं प्रहरी र नेशनल गार्डका १५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर राष्ट्रपतिमा बाइडेनको सत्तारोहण !
गाँजा गन्हाउने सियाँल : शिव र गणेशको मूर्तिले शोभायमान बर्लिनको मुख्य चोक
शंकर प्रसाद श्रेष्ठ अर्थात् शैलेन्द्र साकार: शंकर भित्र अन्तर निहित रहेको साकार
लोकतन्त्र र कानुनी शासनको पतन : विकृति प्रजातन्त्रको भेषमा रहेको शक्तिशाली गुटतन्त्र !
जन सांस्कृतिक महासंघको वागमती प्रदेशमा जिम्मेवारी बाँडफाँड
नेता ज्यू, राजनीतिलाई लाजनीति नबनाउने हो कि ! जनतालाई 'नो भोटमै' धकेल्ने नै हो र !?
नेपालमा कोरोना भाइरसको ‘नयाँ भेरियन्ट’ वा ‘नयाँ स्ट्रेन’ : कति चिन्ता ?
विघटनका महिना दिन : संविधानलाई गिजोल्न र धारा-उपधाराको गलत व्याख्या र आलटालमा खपत !
ञिङमा शेर्पा समुदायमा आदर्श धर्म : निङमापा, शाग्यपा, काग्युर्पा, गेलुक्पा !
केयुको भिसीमा प्राध्यापक डा‍. भोला थापा नियुक्त
राष्ट्रिय गौरवको योजना अन्तर्गत मदन भण्डारी मार्ग निर्माण तीव्र हुँदै
तीन लाख ११ हजारले डाउनलोड गरे ‘नागरिक एप’
लोकसंवाद लोकमा भइरहेको मुख्य गतिविधि र विचार संप्रेषण गर्ने थलो हो। यसले तपाईँको सूचना तथा विश्लेषणको तिर्खा मेटाउने प्रयास गर्नेछ। यो सत्य र निष्ठामा विश्वास गर्दछ। समाजमा भइरहेका नकारात्मकमात्र होइन, सकारात्मक कामको पनि कदर गर्न प्रेरित छ। पत्रकारितामा... सबै
प्रधान कार्यालय : अनामनगर, काठमाडौं
फोन : ९७७-१-५७०६३०५ (977-1-5706305)
इमेल : loksambad1@gmail.com, loksambad@gmail.com
लोकसंवाद संचार गृह प्रा. लि.का लागि
सूचना विभाग दर्ता नं : ११३०/ ०७५/०७६